EyeNkanga 19, 2017 admin isicelo, ikhompyutha, umqhubi, Inkxaso OSGEAR, iimveliso, ukugcinwa 0
Blu-ray Disc (abbreviation BD) yenye kwisizukulwana esilandelayo yeefomati disc emva DVD ukugcina high-high yevidiyo ophezulu-umthamo data. Blu-ray Disc yindlela elandelayo-isizukulwana idiskhi iinkcukacha kucwangciswe liSebe Blu-ray Disc Association, nekukhankanywe kuyo iingongoma Sony kunye Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., kunye SONY wakhokela nokukhuthaza olubanzi iimveliso ehlobene 2006. compact Blu-ray ezibizwa ngokufunda nokubhala usebenzisa laser umqadi obhulowu a ombala 405 obuziinanometer (a 650 nanometer kwamaza umfundi obomvu ngenxa DVD kunye 780 nanometer kwamaza infrared ukuba iiCD). Nantsi iqela Blu-ray software kakhulu ukudlala elivuthayo professional ukuba wonke ukuze babelane.
Utyelelo software Okuninzi ocetyiswayo ngezantsi ~~~
Cebisa for Mac OS
Inombolo yokuvula: os-ezinkulu
Hambisa Hot ~ ~ ~
Khadi in Type
Nceda sebenzisa nokuxhasa software original
Leawo uba ezamahala Blu-ray yokudlala idiskhi yokugcina ulwazi, DVD ezamahala yokudlala idiskhi yokugcina ulwazi, free 4k HD yokuzonwabisa, ISO ezamahala player ifayile, kwaye ezamahala umdlali audio. Ukuba a free Blu-ray idiskhi player software app, edlala compact Blu-ray for ngokupheleleyo, kwehlisa iyahambisana DVD akwazi ukudlala, enoba commercial okanye rhoqo. Yeyona the best software khululeka ukudlala Blu-ray on Windows (kuquka Windows Vista, XP, 7, 7, 8, 8.1, yaye 10).
PowerDVD igcwele movie unique, umculo kunye photo iimpawu neemfanelo ukudala emehlweni unbeatably immersive & umsindo nakho. Kwaye ukuba abantu abafuna ukwenza cinema bavakalelwa emakhayeni abo, Ngoku PowerDVD uye technology kwihlabathi-yokuqala kubalulekile ukuphucula isakhono sakho 4k and HDR TV!
Umdlali Macgo Blu-Ray
Standard Versiom - The best Umdlali blu-ray software that supports BD, iifayile ISO kunye nabalawuli BDMV kunye hardware esingaqhelekanga - BluFast MX.
Pro Version - Inkxaso-mvo ngokupheleleyo Blu-ray menu Ukuphucula umgangatho yoqobo komsindo Ihambisana kunye neefomathi ezahlukeneyo zosasazo ezininzi
Zisa Hollywood ekhaya kunye ukudlala ividiyo phambili, Blu-ray kunye software DVD, Corel® WinDVD® Pro. Ukusuka phezulu-resolution 4k videos and HEVC (H.265 *), ku 3D ividiyo, DVD kunye Blu-ray, sinandipha uluhlu enkulu yeefomati nomgangatho emangalisa, Dolby sound nokunye. ulawulo enobuchwepheshe ku lihlaziya, interface mihla akuvumela ngokulula ocoliweyo-tune yevidiyo nomsindo. Plus, uyakuthanda ukudlala made nge ezintsha 240 ukusebenza fps.
Umdlali AnyMP4 Blu-Ray
Play naliphi Blu-ray Disc / Folder / ISO umfanekiso wefayile, 4K ividiyo kunye 1080p HD video nge image definition ephakamileyo Obusemagqabini ubunjani imidlalo yokuzonwabisa.
Blu-ray Toolkit zonke-in-nye Blu-ray software, eliquka Blu-ray Player, Blu-ray nekhuba, kunye software Blu-ray Copy Platinum. Nale Blu-ray Toolkit enamandla yaye ubhetyebhetye, abasebenzisi ngokulula ukujongana nayo nayiphi na umba Blu-ray kwaye bonwabela obungaqhelekanga amava Blu-ray.
Umdlali enamandla ebetha Blu-ray disc, ifolda blu-ray, DVD disc / ulawulo / ifayile ISO kunye namajelo eendaba eziqhelekileyo iifayile kunye neevidiyo kamnandi. Uyakwazi ukuba uyidlale Blu-ray disc kunye 1080p HD isiphumo ezibonwayo ngqo yaye badlale H.265 / HEVC ujiko 4k iifayile yokuzonwabisa losslessly kwi PC. Yintoni egqithisile, lo Aiseesoft Blu-ray Player nezenzo njenge umdlali media ofanayo nayiphi HD / SD iifayile yevidiyo kwaye bayakwazi ukuba isiphumo immersive yomsindo.
~ Fumana inkxaso Blu-Ray ngaphezulu kunye neemveliso Cofa apha
Indlela yokudlala 3D Blu Ray BD Video??
Kutheni akakwazi ukufunda okanye ukudlala Blu-Ray DVD disc?
esixhasiweyo ekutolikweni OS-UKULONDOLOZWA Nokia Intel software isixhobo Model nokuVavanyelwa yenkcukachaName umlawuli wesixhobo Graphics HD Samsung ICPU inkxaso umqhubi Inkxaso Series Driver Technology_Internet Inombolo kanomyayi Injongo Public 64-bit Windows Technology
Inkxaso Series Driver inkxaso umqhubi Inombolo kanomyayi esixhasiweyo smartphones ICPU Nokia Intel software Technology_Internet ekutolikweni Samsung Qualcomm Technology Sony Ericsson nokuVavanyelwa Graphics HD Umncedisi Intel OS-UKULONDOLOZWA Samsung Galaxy Injongo Public isixhobo Model umlawuli wesixhobo 64-bit Windows yenkcukachaName